FAKAFAKA: aza be fampitahana sahala amin’io ! | NewsMada
Iray amin’ireo filazana ny faharetan’ny fotoana teo amin’ny Malagasy ny « indray mahamasa-bary ». Ohatra hanaingana ny fanadihadiana ihany io satria azo inoana fa tsy maintsy hisy indray any ho any hanontany hoe : « Firy minitra na adiny firy aza ny faharetan’izany indray mahamasa-bary izany ? ». Tsy nitovy sy tsy mitovy ary tsy hitovy velively anefa ny atom-pisiana sy ny seha-piforonan’ny « indray mahamasa-bary » raha ampitahaina amin’ny minitra sy ny ora.
Io fanaovana fampitahana be fahatany io hatrany no mahatonga ny Malagasy hanana fomba fisainana miiba sy mivaona amin’ny nanaovan-Janahary azy. Niroborobo fatratra io nandritra ny « fanagasiana » ny fampianarana. Nianaka teny amin’ny fiarahamonina izany. Nilofo fatratra nikaroka dikanteny isankarazany rahateo ny manam-pahaizana…
Raha eo amin’ny sehatry ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao, tery vay manta ihany ny fanaovana fampitahana amin’ny zava-misy eto Madagasikara sy ny any ivelany. Andramo hampitahaina amin’ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao vahiny, ohatra, ny hevitra mafonja fonosin’ny hoe « fihavanana », « resy tondro maso », « hasina », sns. Toraka izany ihany koa ny hasarobidin’ny anarana hoe « reny », « mangoro », sns. Inona no handikana ireo ? Hampitahaina amina inona ireo ?
Raha mbola mitohy io fanaovana fampitahana be fahatany io, ho very tanteraka ny maha izy manontolo ny Malagasy. Tsy misy dikany sy heviny intsony ireo « zava-masina » notandrovina sy nolalain’ny Malagasy fatratra. Sanatriavina hotanteraka tokoa ilay fomba fiteny manao hoe « tsy mahalala izay atsimo sy avaratra » satria efa nobosesehina ny « à gauche » sy « à droite ». Atsimo sy avaratra izay nisy heviny lalina eo amin’ny fiainam-piarahamonina malagasy. Nisy nitana ny anjara toerany teo amin’ny orim-bintana malagasy, sns.
… Sanatriaviny very ny maha izy azy ny Malagasy, ho very hanaraka izay ihany koa i Madagasikara sy ny momba azy manontolo !